ပါးလွှာလွန်းတဲ့ ဘရာလေး နဲ့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလောက်အောင် လှရက်လွန်း နေတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်…. – Shwe Sar
ပါးလွှာလွန်းတဲ့ ဘရာလေး နဲ့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလောက်အောင် လှရက်လွန်း နေတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်….
By Shwe SarPosted on November 21, 2020 November 21, 2020
မင်းသမီးချောလေး ရွှေပိုးအိမ်ကတော့ အနုပညာလောက မှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ နေရာတစ်နေရာကို အခိုင်အမာရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သူမက အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ရင်းလူမှုရေးအကျိုးပြုပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေမှာ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွှေပိုးအိမ် က အနုပညာ နယ်ပယ်မှာ လည်း သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ သွယ်လျ ကျစ်လျစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စရာအပြုံး ချိုချို လေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှရက်လွန်းနေတဲ့ သူလေးပါနော်..။လတ်တလောမှာဆိုရင်တော့ ရွှေပိုးအိမ်က Photo Shooting လေးတွေ ရိုက်ကူးပြီး ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ သူတွေအတွက် သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖော်ပြပေး တာတွေ့ရပါတယ်။ ယခုမှာ ဆိုရင်လည်း ရွှေပိုးအိမ် က လွမ်းနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေထဲမှာတော့ ရွှေပိုးအိမ်က လွတ်လပ်ပေါ့ပါး တဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင် ဝတ်စုံလေး ဝတ်ပြီးချစ်စရာအမူအရာလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အကြည့်စူးစူးလေးတွေကလည်း မြင်မိသူတိုင်း ချစ်အားပိုစေမှာတော့ အမှန်ပါနော်…။ ကဲ…ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုမှာတော့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလောက် တဲ့ အမူအရာလေးတွေ နဲ့ အထာ ကျကျ ပို့စ်ပေးနေတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Source – Shwe Poe Eain’s fb account
Previous post မိန်းကလေးတွေ အားကျရလောက်တဲ့ ဖက်ရှင်ဆိုင်လောက် ရှိတဲ့ ဖြူဖြူထွေး ရဲ့ အဝတ်အစားအခန်းကြီး (ရုပ်/သံ)
Next post ဆက်ဆီမော်ဒယ် ဖြစ်တိုင်း ခေါ်အိပ်လို့ မရပါဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနု (ရုပ်/သံ)